Guddoomiye waaxeed oo saakay lagu dilay maamulka degmada Deyniile - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Guddoomiye waaxeed oo saakay lagu dilay maamulka degmada Deyniile
Guddoomiye waaxeed oo saakay lagu dilay maamulka degmada Deyniile
Sida ay sheegayaan warar ka imaananaya degaanka Deyniile Guddoomiye waaxeed ka tirsan Maamulka Degmada deyniile ee Gobolka Banaadir oo saakay lagu dhex dilay Guri uu deganaa oo ku yaalla degmadaas. DilkaGuddoomiyaha Waaxda Halgan ee degmada Deyniile ayaa waxaa la sheegayaa in loo adeegsaday tooreey, iyadoo la xusay in falkaas ay ka dambeysa xaaskiisa uu qabay.
Sida ay sheegeen Goobjoogaal, Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Fooldibi ayaa waxaa marka hore soo gaaray dhaawac Culus, maadaama tooreeyda looga dhuftay meel halista ah, kadibna waxaa la geeyay Isbitaalka Digfeer, iyadoo markii dambe halkaas uu ku geeriyooday. Wararka ayaa intaas kusii daraya in Guddoomiye Cabduqaadir Fooldibi iyo xaaskiisa uu soo kala dhex galay muran kooban oo aan weli wax faah faahin laga helin, kaasi oo markii dambe sababay gacan ka hadal.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir oo ay uga hadlayaan falkaas lagu dilay Guddoomiyihii waaxda Halgan ee Cabduqaadir Fooldibi.
Previous articleAMISOM oo markale loo cusboonaysiiyay joogitaanka Soomaaliya, si sharuud la’aan ah
Next articleGen Odawaa oo war ka soo saaray xasuuqii Gololey ee lagu eedeeyey militariga
DFS oo adeegsaneyso Siyaasiin & Dhaqanka Mudulood ayaa wax kabadal ku sameeysay Ajandaha Shirka 13 July
DFS oo adeegsaneyso Siyaasiin & Dhaqanka Mudulood ayaa wax kabadal ku sameeysay Ajandaha Shirka...
Waxaa mudooyinkii danbe dood dheer ka furneed qabsoomida Shir Weynaha aaya katalinta mudulood kaaso uu dhowr jeer is hortaag ku sameeyen Siyaasiin Xilal hore...
DFS oo adeegsaneyso Siyaasiin & Dhaqanka Mudulood ayaa wax kabadal ku...